PressReader - Ilanga: 2018-02-15 - INSIKA:
Ilanga - 2018-02-15 - Izindaba -
INDLELA isikhathi esesishintshe ngayo eNingizimu Afrika, isibe nomthelela omkhulu endleleni esenza ngayo.
Kunezinto ebesizenza ngokobuzwe bethu, ngisho nasemakhaya bekunemikhuba namasiko okuhambisana nokuthi singabasiphi isizwe. Njengamanje izinto zibukeka seziyingxubevange ngenxa yokuthi sesisondelene kakhulu siyizizwe ezahlukene.
Uthola ukuthi emzini noma emndenini othile, bekunendlela yokwenza izinto ebihlonishwa futhi igcinwa kodwa ngokushintsha kwezinto nesikhathi, le ndlela yaphazamiseka.
Abanye abantu kababe besahlukanisa ukuthi uhlobo lwempilo oluthile baluphila bagcine kuphi, uthole sebethatha impilo yasemsebenzini bayiphile emakubo kanti mhlawumbe kayihambisani nomndeni.
Kwesinye isikhathi uthole ukuthi emsebenzini uphethe abantu ngendlela yakhona, uyafika nasekhaya usesebenzisa yona kanti kayihambisani nezimiso sasemndenini.
Ugcina esenokushayisana namalungu omndeni ngoba ebona ukuthi sengathi kawasahlonishwa. Lo mkhuba uthanda ukudlanga kubantu abasebasha, othola ukuthi ngenxa yesikhundla sasemsebenzini nokuhlala nabantu abehlukene abaphuma ezindaweni ezahlukene, abanamasiko ahlukene, bafika ekhaya baphunyuke bagcine sebenza izinto mhlawumbe ezingemukeleki kahle emndenini. Esimeni esesinzima kakhulu, uthola ukuthi mhlawumbe umuntu usejwayele impilo yasemaflethini noma yasemqashweni, afike ekhaya azame ukuba bamemukele ukuthi yena usephila ngendlela eyehlukile.
Kweminye imizi kakuvukwa ilanga seliphakeme, kuvukwa ekuseni kukhunyulwe izingubo zokulala, kugezwe kwenziwe isidlo sasekuseni.
Nayo-ke ingane ibuya lapho ihlala khona, isivuka emini iyokwenza ukudla igqoke izingubo ebilele ngazo isiyobuka umabonakude, nakhona lapho sekuzobukwa okushiwo yiyona ngoba kuhlobene nomsebenzi wayo.
Kayisenandaba nabantu basekhaya, ifuna bona bahambisane nalokhu esiyikhona. Uma kuphekwe ukudla okuthile, ngeke isakudla, isizogoqoza ibhojwana layo elinokudla kwayo okukhethekile okuhambisana nendlela yokuphila kwalapho ihlala khona.
Kwesinye isikhathi ngisho nendlela esikhuluma ngayo isiyehlukile futhi kayinaki nokuthi lowo ekhuluma naye uzizwa kanjani ngendlela emkhulumisa ngayo. Kuba sengathi ikhohliwe yikhona konke eyakufundiswa neyakhuliswa ngakho kubo kuphinde kube sengathi okwenziwa lapha ekhaya kusemuva, kakusayifanele impilo nezinga layo noma sekusezingeni eliphansi kunelayo.
Kuyaye kungidabukise ukubona izizwe zama-Afrika zidumela kakhulu okwabezizwe futhi zi- kwenza kakhulu kunalokhu okuyikhona, okuyimvelaphi yabo nokuyikhona okubaveza ukuthi bangobani. Ikhaya liyohlale liyikhaya futhi liyohlale linemikhuba yalo eyehlukile kwelinye futhi edinga ukugcinwa nokuhlonishwa.
Uma sithi mazibuye emasisweni, kuyosiza ukuba singayikhohlwa eyokuxwayisa abantwana bethu ngokubalukeka kokugcina izinto zasekhaya nezasekuhambeni ukuze singazididanisi.
Makhosi Ndleleni (Bonakele) MaZulu Zondo. Insika yaMathiyane (isigodlo) Uthishanhloko waseMatatane Secondary School. mthiyasgs@ yahoo.com Sithinte ku: 082 752 7342